Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Dabley Hubeesan oo in ka badan 140-qof ku dishay Xuduuda Dalka Itoobiya la Wadaago Dalka...
August 18 2017 15:33:33
Dabley Hubeesan oo in ka badan 140-qof ku dishay Xuduuda Dalka Itoobiya la Wadaago Dalka...
Dabley hubeesan oo kasoo jeeda dalka Koonfurta Sudan ayaa lagu soo waramayaa in dad ka badan 140-qof oo u badan shacab ay ku dileen Xadka ay wadaagaan Dalalka Itoobiya iyo Koonfurta Sudan.
Dowlada Itoobiya ayaa sheegtay in dableyda weerarka soo qaaday dadka badana dishay in ay ka yimaadeen dhanka dalka Koonfurta Sudan, waxa ayna dableydan horey u qafaasheen 39-caruur ah oo kasoo jeeda Itoobiya.
Wasiirka isgaarsiinta dalka Itoobiya Getachew Reda , ayaa sheegay in Dabley kasoo jeeda Koonfurta Sudan ay dad badan u laayeen xadka Itoobiya, waxa uuna tilmaamay in dadka la dilay kor u dhaafayaan 140-qof oo Itoobiyaan ah.
Dadka la laayay ayaa kasoo jeeda Qoomiyada Gambela ee dalka Itoobiya, waxa ayna qoomiyadan horey weeraro badan oo lagu dhibaateeyay kala kulantay maleeshiyada hubeesan oo kasoo jeeda Koonfurta Sudan.
Dowlada Itoobiya ayaa sheegtay in Dableyda hubeesan ee dadka badan dilay ay kasoo jeedaan Qoomiyada Murle, waxa ayna Dowladu intaa raacisay in maleeshiyaadkaasi dhankooda laga dilay in ka badan 60-qof .
Getachew Reda , ayaa u sheegay BBC-da in dableyda weerarka geesatay aysan xariir la laheyn Dowlada Koonfurta Sudan iyo Koocda Mucaaradka ,waxa uuna tilmaamay in Ciidamada Milatariga Itoobiya ay baacsanayaan dadbleyda weerarka kusoo qaaday dalkooda.
Qoomiyada Murle ee kasoo jeeda Dalka Koonfurta Sudan ayaa marar badan weeraro ay dad badan ku dileen kusoo qaaday dhanka Itoobiya, waxa ayna dableydan caan ku yihiin in ay dhacaan lo'da sidoo kale ay qaataan caruurta si ay u korsadaan.
· mamaan on April 17 2016 ·